हेलो मिस्टर रिकार्डो, तिम्रो प्रशिद्ध पुस्तक प्रिन्सिपल अफ पोलिटिकल इकोनोमी एन्ड ट्याक्सेसन सन् १८१७ मा सार्वजनिक भयो । त्यसयता पूँजीवादले आफ्ना २ सय वर्ष गुजारिसक्...
देशको अर्थतन्त्रको निराशाजनक तस्वीर– चैत लाग्दा पनि किन सुधार भएनन् सूचक ?
यस वर्षका लागि विनियोजन भएको कुल बजेट १६ खर्ब ३२ खर्ब रुपैयाँको करीब ८० प्रतिशत बराबरको रकम आयातमै खर्च भएको छ । अहिलेकै दरमा आयात बढ्दै जाने हो भने च...
तरलता संकटका बीच सातामै ११ अर्ब थपियो निक्षेप, सुध्रिन खोजेका हुन् अर्थतन्त्रका सूचक ?
सरकारले पछिल्लो एक सातामा २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका कारण बैंकहरूमा निक्षेप केही बढेको छ । यद्यपि बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम (तरलता) भने अझै सहज हुन...
अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य आईसीयूतर्फ, दिनदिनै बिग्रिरहेका छन् सूचक
बैंकिङ क्षेत्रको कारोबारले अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य अवस्थाको संकेत गर्छ । तर, पछिल्लो केही महिनायता बैंकिङ क्षेत्र आफैँ बिरामी भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई म...